Info. About फिस्टुला, बाथ, भिटामिन, महिनावारी चक्र, मानसिक रोग, युनिभर्सल हेल्थ केयर, रक्तचाप, रजोनिवृत्ति, रेबिज, लागु पदार्थ, विरुद्ध आहार, सर्पदंश, सापु रोग, सीओपीडी
फिस्टुला शरीरको कुनै पनि भित्री अङ्गहरू, जसमा अनावश्यक प्वाल मा । महिला हुनेछ अमूर्त फिस्टुला बच्चा प्राप्त को जटिल, वा यौन हिंसा, कारण हुनेछ, यो के गर्न. यो लामो मा वितरण Waltham महिला योनी र पिसाब थैली वा Malaika Kosice बच्चा दबाव छ कि, आफ्नो न ...
बाथ रोग मा शरीर को रोग मा एक शक्ति मा आफ्नो शरीर को अंग को छोराछोरीलाई प्रभावित हुनेछ, रोग को अर्थ यो छ । बाथ रोग धेरै प्रकारका, र विभिन्न प्रकारका हुन, विभिन्न लक्षण देखाउन. तर सबैजसो बाथ रोग सामान्यतया देखिने लक्षण छ कि खुट्टाको जोर्नी दुखाइ र ...
भिटामिन रासायनिक यौगिक छ, कि छ, मानव शरीर, लागि संग राम्ररी काम गर्न तिनीहरूलाई आवश्यक छ । यो भिटामिन ए, यूरोपीय संघ, तपाईं बी भिटामिन सी, भिटामिन डी, भिटामिन ई र भिटामिन एक केक छ । उदाहरणका लागि, अमिलो फल जस्तै सुन्तला र कागति मा भिटामिन सी मा ह ...
Menstrual चक्र, एक महिला मा हुनेछ मासिक प्राकृतिक परिवर्तन हो । यो चक्र को महिला शरीर रूपमा परिपक्वता को जानकारी दिने प्राकृतिक सङ्केत छ । मासिक धर्म, एक गर्न, सार्न, वा रसेल हुनेछ पनि रूपमा चिनिएको यो छ ।
मानिस र पशु गरेको मानसिक सन्तुलन बिग्रेको छ वा मानसिक असन्तुलनको, यो कारण पनि हुन सक्छ, प्रकट गर्न विभिन्न रोग, मानसिक रोग भनिन्छ । मानिस र पशु गरेको मानसिक राज्य बिगार्न रोग छ कि को धेरै प्रकार छन् । मानसिक स्थिति खराब अथवा कमजोर, कति मानिसहरू र ...
सार्वभौमिक स्वास्थ्य हेरविचार लागि, वा सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा को एक प्रकार छ स्वास्थ्य हेरविचार सेवा गर्न जसमा एक विशेष क्षेत्र को सबै वैध नागरिक चिकित्सा, dont चिकित्सा र मनोरोग सेवा उपलब्ध हुनेछ । यस्तो सेवा छ. यो लागत को धेरै हदसम्म गर्न, स ...
हृदय यो बाहिरी देखि, र भित्र प्रवेश redemption through his blood, रगत को नल मा चाप परे, रगत हुन भनिएको छ | सामान्य रक्तचाप छ कि 120/80 गरेको छ । 18 वर्ष, शीर्ष भन्दा मानिसहरूलाई भने, माथिल्लो साहसी प्रेस systolic छ वा 140 भन्दा, र तल्ला -diastoli ...
महिला रसेल मा बन्द गरिएको छ, वा रोक्न एक अवस्था मा जीर्णोद्धार यो भनिन्छ । यस अवस्थामा महिला र काम सदाका लागि बन्द गर्न सकिन्छ. प्रजनन शक्ति को समाप्ती । यो विशेष गरी 50 वर्ष लहर को महिला मा यो हुन. जीर्णोद्धार बढ्न वर्तमान उमेर संग, शरीर एक जस्त ...
रेबिज, पशु from मानिस कि एक कदम मा, रोग । चरा र स्तनधारी को प्राण मा मात्र असर गर्ने यो रोग जंगली जनावरहरू जस्तै:- स्याल, ब्वाँसो, स्याल आदि, जनावरहरू मा उत्प हुन घरपालुवा जनावर कुकुर मा बारम्बार, यो रोग सर्छ । यो रोग को पेरिस: कुकुर काटन मा एक म ...
विभिन्न मादक पदार्थ लागू छ, र यो पिउन जो एक मानिसको मन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, मा हानि लागि यस्तो पछिसम्म थियो लागू पदार्थ भनिन्छ । जो को सेवन प्रयोग र एक व्यक्ति को मानसिक राज्य र कपाल अवस्था परिवर्तन हुनेछ । Obsession छ । लागु पदार्थ प्रयोग गर ...
जुन Khadgar सँगै लिएर, तिनीहरूलाई शरीर गर्न हानि छ, तपाईं को विरुद्ध को आहार । आयुर्वेद विज्ञान अनुसार यस्तो विरुद्ध, आहार, नियमित सेवन शरीर को विषय छ यस्तै । माछा र दूध, सँगै लिएर गुणहरू हुन विरुद्ध यो । किनभने, यी दुवै गर्न खाद्य गुणस्तर असमान ...
सर्पले गरेको Toki, प्रयोग, वा SARPs त बाइट्स, र सबै भन्दा राम्रो गर्ने भन्ने विषय retpala गए एक मानिस वा एक पशु मर्न पनि एक खतरनाक समस्या छ । ठूलो हुनेछ क्षेत्र मा जनवरी वर्तमान मा, शरीर क्यारियर, र नाइजर आफ्नो सिकार गर्ने छैन, तर केही क्षेत्र को ...
CPU रोग को आँखा मा रोगहरु को एक किसिम, जो अचानक आँखा रातो बनाउन यो । हामी सपा रोग भन्ने बुझ्न सक्नुहुन्छ । अचानक, आँखा लागे रोग छोटो समय मा, यो प्रकाश नै नेतृत्व गर्न सक्छन् । उज्यालो हेर्न गाह्रो हुनेछ कालो भागको बीचमा सेतो देखिन्छ । यो छोटो अवध ...
आमा को नजन्मेको देखि बच्चा निकाल्न गरिने शल्यक्रिया गर्न बहना, तिनीहरूलाई को मोहिनी सेक्स हुन, भनिन्छ । सामान्य बाटो, वा Yonemura प्रसब वा cesarean बहना देखि बच्चा भालु मा एक सानो विभिन्न छ जब, यो छैन । मोहिनी को सर्जरी क्रम मा, सबै आवश्यक precau ...
पुरानो अमूर्त फुफ्फुसीय रोग, अर्थात् सीओपीडी, रोग को चिकित्सा विज्ञान -चिकित्सा विज्ञान)को भाषा को पुरानो अमूर्त फुफ्फुसीय रोग, अर्थात् मा, COPD को लागि जानिन्छ. श्वसन पर्चा sangrenta गए, सास फेर्न गाह्रो बनाउने यो रोग मा boonpala गरेका लागे अलग ...
सुडेनी को स्वास्थ्य क्षेत्र को तीन महिला जो हुनेछ हरर को प्रसब को एक प्रणाली छ, महिलाको यौन र प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, menstrual र नवजात हेरविचार, गर्भावस्था, र विशेष एक श्रेणी चयन गर्नुहोस् छ. यस अलावा, तपाईं pregnancies, गर्भपतन, पाठेघर ...
Solanine, एक glucoside विषाक्तता, वा perdre, र पनीर छ । यी हुन् फलफूल, आलु, Colada गर्न, आदि, आदि हुन पाइने यो । जो को पखाला, उल्टी, चक्कर आना, टाउको दुखाइ र अन्य रोग नेतृत्व गर्न यो । यो क्लोरोफिल कि पछि एक मात्रा धेरै कारण आलु हरियो देखिन्छ ।4...
Serb छ, वा झाडी रोग हो ओरेन्स Susumu नाम एक परजीवी संक्रमण हुन लागे को एक रोग । परजीवी, एक प्रकार को पछि यो मा सार्न. यो रोग देखि मानिस मा सार्न भनेर । संक्रमित एक माइल मानिस काट र्याली गरिएको छ खतरनाक जीवाणु रगत मा, मा फैलिनु फोल्डर.
Streptococcal pharyngitis, streptococcal tonsillitis, वा streptococcal दुखेको घाँटी समूह ए मा streptococcal infection कारण एक प्रकार को pharynx त साँचो हो । यो तन्यता र सायद गला सहित, यो घोर गर्न राम्रो of the world. साधारण लक्षण ज्वरो, घाँटी खरा ...
मानिसजातिको, सुरुदेखि नै, खोज को एक महत्त्वपूर्ण कुरा छ Englishma यो Panacia भन्नुभयो । यस अलावा, सबै Crue पनि रूपमा चिनिएको छ के किन म यो हो भनेर भन्न यस्तै लागूपदार्थको को सबै रोग निको पार्न यो । यो खोज को आज गरेको छैन-वर्ष हजारौं लागि, यो । चि ...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य हेरविचार सिस्टम मा, नियमहरु र को कार्यान्वयन जिम मा एक सरकारी निकाय हो कि यो । मंत्रालय को काम मा अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा को विकास को व्यवस्थापन संरचना को जनसंख्या नीति, योजना र कार्यान्वय ...
Hipertiroidismo थायरयड ग्रंथि उत्पादन गर्न harmonogram आए gbde हुने एक रोग हो । आर्कटिक, जबकि भने रगत temporaire को हर्मोन बढी देखिने, र tease हर्मोन को कम देखिन्छ मा hipertiroidismo भएको हो । रगत मा थाइरोइड को मात्रा, त्यहाँ हुनेछ अधिक बिरामी ति ...
हाडजोर्नी स्लाइस वा orthopedics स्लाइस मा एक क्षेत्र. यो क्षेत्र को तीव्र, पुरानो, आघात, र Orus overuse घाइते, र अन्य musculoskeletal व्यवस्थापन गरेको रोग संग सम्बन्धित छ । हड्डी सर्जन ठेगाना सबैभन्दा musculoskeletal रोगबाट सहित गठिया, आघात र जन् ...
HTTP एक सरुवा रोग हो । यो रोग तेज को आकार रूपमा Ussery बान्क्रफ्ट नाम filaria अध्यक्षता, यो लागे । यो privy गर्न एक समुद्र तट अर्क मा एक स्नान लामखुट्टे र कालो igaco Tokio मा सार्न ।
संसारमा-व्यापक रूपमा भइरहेको औद्योगीकरण र मानव जीवन, occurring को पाठ्यक्रम मा पूजाहारीहरू Futuro एक मानव मृत्युको पहिलो कारण बन्न पुगिरहेको छ । पुरुष-महिला dwarfs असर रोग अझै पनि बढ्दो छ, जो को आदेश छ । Futuro अगाडि, तापनि 80% हृदयघात रोकथाम गर् ...
Hepatitis एक भाइरस द्वारा संक्रामक रोग छ । यो एक रोग छ जब, यो जिगर संग प्रभावित । को मौसम को अन्त भन्दा बुरा भन्दा समय मा देखा यो । यो, जब उपचार छ कि छैन झूठ को क्यान्सर र सिरोसिस झूठ हुनेछ संभावना हुन । यो एडा छ, सबैभन्दा खतरनाक मानिन्छ । Hepati ...
ग्राम को एक को सबैभन्दा ठूलो को परम्परागत उपाय गर्न Ikiru को एक छ । जुन एक ठोस वस्तु, को मात्रा नाप्ने सी एकाइहरु छन् । यो Kioko हजार एक भाग हो यो । त्यसैगरी, सबैभन्दा बारम्बार 1000 ग्राम बराबर एक पाउन्ड के हुनेछ ।
अक्टोबर मा, रोमन, र ग्रेगरी पात्रोमा को दशौं महिना, you would be साथै 31 दिन सात महिना को छैटौं महिना, तपाईं छन्. पुरानो Romulus पात्रो अनुमानित 750 आईपी पछि आठौं महिना । यो महिना को नाम ग्रीक भाषा को acrtobat आउन कि जसको अर्थ, आठ हुनेछ । वास्तवम ...
अगस्ट नै छ महिना को आठौं महिना । यो जुलियन र Gregorian calendar is finally going to be । पहिलो संग आएको भन्ने महिना मा तिनीहरूलाई मा जुलाई र पछि आउँदै महिना तिनीहरूलाई संग, सेप्टेम्बर मा भनिन्छ
अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाण, मान्छे समय वा UTC संसारको मानक समय क्षेत्र छ । इन्टरनेट मा, अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाण छ जस्तो देखिन्छ यो प्रयोग. यस समयमा, को भाग शून्य देशान्तर लाइन छ मतलब सौर समय बराबर हुनेछ । यो संसारमा, समय को प्राथमिक मानक छ कि, ...
आइतवार, बाइक फोन लागि क्यालेन्डर को मानक गर्नेहरूलाई मा हप को पहिलो बारी गर्न यो । यो, संस्कृत मा आदित्य वा नदी पनि भनिन्छ । हान्नोवर पछि नाम छ रूपमा पनि जानिन्छ । आइतबार, शनिबार बीच तुलना पट्टी छ । ज्योतिष र धर्मशास्त्र अनुसार, सूर्य को नाम पंक् ...
छ लागि, वा ग्रेगरी पात्रोमा संसारको गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ अन्तर्राष्ट्रीय for it. यो संसारमा छ, मा लगभग हरेक ठाँउ मा पहुँच पात्रो, हो । यो जुली छ लागि, यो रूपान्तरण. छ, नेपालको आधारभूत एकाइ को दिन, हुनत. 365 दिन एक वर्ष, तर प्रत्येक को चौथो वर् ...
घडी छ, कि रूपमा चाँडै ट्विटर समयमा, शो गर्न एक उपकरण I don t understand the file. त्यो पनि घडी नै हो तर पौराणिक मृत्यु को एक घडी भने समय मापन एकाइ मा छ एक पनि बन्द ढोका पछि Patag घडी मा र क्षण को प्रयोग भएको पाइएन । वर्तमान समय मा एकाइहरु को मापन ...
ढाँचा:January 2021 जनवरी जुलियन र यो ग्रेगोरियन पात्रो वर्ष को पहिलो महिना । महिना 31 दिन हो । जेन Janusco नाम महिनाको नामबाट जनवरी राखिएको छ, कि छ, रोमन, ढोका र प्रवेश गर्न र परमेश्वरको नाम छ । जनवरी र फेब्रुअरी क्यालेन्डर अरूको महिना पछि टुक्रा ...
मिति, समय, कि एक हालतमा छ । यो छ महिना को वर्ष, विगतमा मा, वाको आदि, द्वारा सहित, जन्म, मृत्यु आदि, को कार्यहरु कुनै पनि अभिलेख राखिनेछ माध्यम यो । मिति गर्न को प्रयोग Puranic पटक पहिले नै, जब आयोत गर्न अनुमानित छन्. Puranic पटक, विद्वान, मिति गर ...
रात वा बिहान Hannibal" अतियथार्थवाद छ अर्को को बेल समय छ । रातो उल्टो छ दिन । लाल फरक छ, यो आघात को फरक हुनेछ त्यसो गर्न समय र अन्त मा, पनि फरक हुनेछ समय, यो के.रात-समय टच उहाँले, भाषा, भौगोलिक, पाटी, आदि. भर हुँदैन । कुनै पनि आघात रातो उसलाई एक ...
वसन्त, शरद ऋतु जाडो मौसम र simmer गर्न शरद ऋतु मा केन्द्र गर्न अगाडि आउन र6मा छ मौसम मा, मनमोहक मौसम हो । वसन्त मा, एक बहार, अर्थ यो छ । वसन्त, को मौसम को प्रकृति मा बहार आउन । हिन्दू धर्म ठूलो पाठ को गीत स्क्रीन मा, भगवान, श्री कृष्ण भन्नुभयो ...
शक संवत् वा शिक्षक कसको लागि खातिर, वा श्री केक भने पनि लेखिएको ऐतिहासिक for it. यो सुरूवात तपाईं वर्ष को लागि 78 पक्ष हुन जाँदै छ, त्यही दिन. भारत मा, यसको लार संदिग्ध थिए भनिन्छ । यो छ को प्रयोग को लागि हिन्दु-बौद्ध र जैन धर्म को पुस्तक मा. यो ...
समयमा उनको विभिन्न नयाँ नापन गर्न यो बाटो मा शब्द को विकास को तर्क छ । त्यसैले, क्रम मा एक सय वर्षको अवधिमा एक सताब्दी को, छ कि चल गरियो । र अब को नै भनिन्छ । सही, अब हामी acces सय वर्ष, को अर्थ acces-शताब्दीको सुरुवात गर्दा, तपाईँ माथि हुनुहुन्छ ।
शनिबार वा sinister गर्न विक्रेता को चुनाव मा पात्रो अनुसार, यो हप्ता, सातौं दिन । शुक्रबार आइतबार गरेको केन्द्र मा यस दिन गर्न नेपाली विद्यार्थीहरूको हुनेछ भनेर निकै be glad to do it. तर युरोप र केही अन्य देशहरू भनेर, मा शनिवार गरेको यो हप्ता को ...
"समय"बस एक अर्को घटना मा अन्तर का रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । विभिन्न उप विभिन्न उपाय अपनाए मा नाप्ने गरेको पाइन्छ । समयमा मापन, प्रणाली को एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । कुनै घटना मा गिरा शहर सकेसम्म घटना पछि मा उल्लेख रिपोर्ट देखि घटना भयो जब सम्म ...
को बिल । त । 2048 मा 1991 - उज्बेकिस्तान मा सोभियत संघ देखि स्वतन्त्रता माथि प्राप्त गर्न ।. को बिल । त । 2061 देखि 2004 मा इराक - 12, आर्थिक संकट को हत्या मा एक विरोध, काठमाडौं अधिकांश जनशक्ति मा कम्पनी को कार्यालय मा आक्रमण, र आगो मा थियो यो ।. ...
2072 वैशाख 12 7.8, को परिमाण को विनाशकारी घर को 15 दिन छैन सफेद गर्न लागिरहेको नेपाल, codrii केन्द्र बिन्दु, 12:50 pm मा 7.3 को परिमाण अर्को भूकम्प, भावना थियो, कि त सानो ठूलो-प्रविष्ट, तपाईं महसुस भुकम्प हुनुपर्छ रूपमा यो छ.
1384 – समुद्र महिला Atapi पोल्याण्ड राजा संग ।. 1793 – फ्रान्सको जीत पछि, लड्दा युद्ध समाप्त भयो ।. 1813 – छैटौं लोलिता नेपोलियन बोनापार्टले गर्न लाइन को आक्रमण मा ।. 1841 – कुइक विश्वविद्यालय, त्यहाँ स्थापित भएको थियो ।. 1951 – पाकिस्तान पहिलो प ...
2058 फेब्रुअरी 19 शुक्रबार, Narayanhiti ठूलो the then King Birendra Shah, जब, पछि जीवित संग उनको लागि सम्पूर्ण वंश गरेको हत्या गरेको थियो. जसलाई Narayanhiti दरवार हत्याकाण्ड, रूपमा चिनिएको छ ।.
त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ को स्थापना Wiley.सं. 2016 को वर्ष मा यो छ । जुन, अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा प्रदान भनेर पहिलो र अग्रणी संस्थाका । 3042-5-2 को त्यो क्षेत्र को फैलन मा, विश्वविद्यालय केन्द्रीय प्रशासनिक कार्यालय र विश्वविद्यालय केन्द्रीय ...
12 वैशाख, मा कार्य लिएर 7.रिएक्टर, एक विनाशकारी भूकम्प काठमाडौं उपत्यका भित्र गर्न रूपमा नजिक, 13 एक सय भन्दा bicorn गएका थिए । र भूकम्पीय सांस्कृतिक नगरेको रूपमा परिचित काठमाडौं उपत्यका, प्रायः सबै ऐतिहासिक धरोहर क्षतिग्रस्त थियो भनेर ऐतिहासिक र ...
1791 चार्ल्स बाइबल मृत्यु:1871 deference इन्जिन, एक उपकरण इन्टरनेट ।. 1976 मा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादी गरेको स्थापना. 1898 कसरी हेर्न को लागि र पाठ्यक्रम को शुद्ध मध्यम संसाधन ।.
मा फ्रान्स मा मे6मा राष्ट्रपति चुनाव गर्न रूढिवादी उम्मेदवार को निको सार्कोजी सामान्य तर्क छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न उनको 53 प्रतिशत मत हासिल गरेका छन् । उनको गरौं विरोधी समाजवादी पार्टी गरेको उम्मेदवार Segolene रोयाले, 47 प्रतिशत मत हासिल ...
home अगसट रेबिज षमत दवस लगऔषधदरवयसन उचचरकतचपकसरघटउन इसव वसथजनसखयमनतरलय युनिभर्सल हेल्थ केयर सर्पदंश missions रयनवयन नगरकक समवत अनदन हलथ इस्वी सम्वत् महवरढलहनकरण जषठनगरकदवस २६ डिसेम्बर price महिनावारी चक्र भएक परसर missionconcepcionfacebook wwwdoegovnp महनवरभनकह उपय subisuonlinepayment